Jamaica waxay soo dhaweynaysaa 1 milyan oo booqde tan iyo bilowgii masiibada COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Jamaica waxay soo dhaweynaysaa 1 milyan oo booqde tan iyo bilowgii masiibada COVID-19
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Daynel Williams (bidix), iyada oo canuggeedii gacanta ku hayo, waxay muujineysaa xamaasad sida Wasiirka Dalxiiska, Mudane Edmund Bartlett (Midigta 3aad) oo u sheegaya in ay tahay Jamaica hal milyan oo booqde oo joogsi-joog ah tan iyo bilowgii Faafida COVID-19. Sidoo kale, la wadaaga daqiiqaddan, inta lagu soo dhoweynayo gegida dayuuradaha caalamiga ah ee Sangster si loo xuso taariikhdii shalay (Ogosto 15), waa (LR) Madaxa Fulinta ee Garoomada Diyaaradaha ee MBJ, Shane Munroe; Agaasimaha Gobolka ee Iibka, Blue Diamond Resorts International, Kerry-Ann Quallo Casserly iyo Jamaica Hotel iyo Guddoomiyaha Ururka Dalxiiska, Clifton Reader.
Waxay la yaab ku noqotay ilmo ka ilmeysiiyay hal rakaab oo JetBlue ah iyo qoyskeeda iyadoo warshadaha dalxiiska Jamaica ay astaan ​​u tahay soo dhaweyn muhiim ah oo lagu soo dhaweynayo hal milyan oo booqdayaal joogsi-doon ah 13 bilood gudahood, iyadoo ay jirto masiibo.
Hal milyan oo rakaab ah oo soo gaadhay Jamaica badhtamaha COVID-19 ayaa hadiyado lagu shubay markay timid.
Hadiyadaha soo-dhaweynta waxaa ka mid ahaa foojarka, oo shaqeynaya hal sano, oo qoyska oo dhan u oggolaanaya 4-maalmood 3-habeen oo fasax ah oo loo dhan yahay ee Royalton.
Saddexdii bilood ee la soo dhaafay, dalxiiska Jamaica wuxuu kordhay 5,000% dadka imanaya.
Daynel Williams, oo ay weheliyeen afar xubnood oo qoyska ka tirsan, ayaa aad ugu farxay farxad markii laga saaray safka imaanshaha JetBlue ee New York shalay (Ogosto 15), si ay ula kulmaan koox mas'uuliyiin ah, oo uu hoggaaminayo Wasiirka Dalxiiska, Hon. Edmund Bartlett. Waxaa lagu shubay hadiyado iyo hambalyo kal iyo laab ah oo ah booqashadii malaayiin tan iyo markaas Jamaica ayaa dib loo furay Xuduudaheeda u socdaalka hawada caalamiga ah Juun 15, 2020. Dhammaan xuduudaha ayaa la xiray Maarso 2020, iyadoo la jaray dhammaan imaatinka maadaama cudurka faafa ee coronavirus, COVID-19, uu bilaabay inuu ku dhinto.
Iyada oo ilmo gacmaha ku haysa iyada oo dhallaanka ku haysa labiskeeda, Mrs. Williams waxay ku dhawaatay hadal la'aan laakiin waxay ku guuleysatay inay ku celiso "Oh God!" iyada oo isku dayaysa in ay xakameyso farxadeeda sida Wasiir Bartlett u sheegay in iyada oo ah booqdaha joogitaanka malaayiinta, ay hadda tahay xudunta dareenka caalamiga ah, iyada oo wajahaysa dhowr wakiil oo warbaahineed oo u ordaya in ay isku soo dhawaadaan iyada iyo qoyskeeda.
Sodohdeed, Jennifer Williams, oo u dhalatay Jamaica kana soo jeeda Oracabessa, St Mary, ayaa farxad la ilmeysay markii ay ilmeysay. “Waxaan muddo iyo ka badan 30 sano u safrayay Jamaica taasna weligeed ma dhicin; Aad ayaan u faraxsanahay, waxaan dareemayaa inaan ooyaya. ” Waxay oggolaatay in dhowr ilmadood oo farxad ah ay daadato iyadoo raacisay, “Aad ayaan u faraxsanahay, aad iyo aad ayaan u faraxsanahay. Ma sheegi karo sida aan dareemayo. ”
Hadiyadaha soo-dhaweynta waxaa ka mid ahaa foojarka, oo shaqeynaya hal sano, oo qoyska oo dhan u oggolaanaya 4-maalmood 3-habeen oo fasax ah oo loo dhan yahay Royalton, oo uu soo bandhigay Agaasimaha Gobolka ee Iibka ee Blue Diamond Resorts International, Kerry-Ann Quallo Casserly.
Isaga oo ka hadlaya muhiimadda munaasabadda, Wasiir Bartlett wuxuu yiri: "Tani waa taariikh muhiim u ah taariikhda dalxiiska, weligeed ka hor, sannad iyo bil gudaheed waligeen malaayiin dalxiisayaal ah oo dalkeenna yimaada ayaa noo yimid." Kahor COVID-19 waxay Jamaica ku qaadatay ku dhawaad ​​20 sano si ay u diiwaangeliso malaayiinkii ugu horreeyay ee yimid sannad gudaheed. Si kastaba ha noqotee, illaa 2019, wax yar ka hor inta uusan masiibada ku dhicin, joojinta iyo imaanshaha doonyaha marka la isku daro, waxay dhaaftay 4 milyan.
Tan iyo markii dib loo furay xuduudaha 15 -kii Juun, sannadkii hore, dalxiiska ayaa kasbaday US $ 1.5 bilyan oo kaliya in ka badan 50,000 oo ka mid ah 130,000 oo shaqaale ah oo shaqada laga joojiyay, ayaa hadda ku soo laabtay shaqadii. Gegida Diyaaradaha Caalamiga ah ee Sangster oo keliya ayaa lagu xisaabiyey 5,000 oo ka mid ah 7,000 oo shaqo oo dib loo soo celiyay.
Mr. Bartlett wuxuu yiri rubucihii la soo dhaafay, “dalxiiska ayaa kordhay 5,000 boqolkiiba dadka imanaya” dakhliguna sidoo kale aad buu u kordhay, “markaa shaki kuma jiro sida saamaynta dalxiisku ku leeyahay Jamaicabarnaamijka soo kabashada dhaqaalaha. ”
Waxaa ka mid ahaa xafladda soo dhaweynta oo ay weheliyaan Minster Bartlett iyo Marwo Casserly, waxaa ka mid ahaa Agaasimaha Dalxiiska, Donovan White; Jamaica Hotel iyo Guddoomiyaha Ururka Dalxiiska, Clifton Reader; Madaxa Fulinta (Maamulaha) Madaarada MBJ, Shane Munroe iyo Madaxweynaha iyo Maamulaha Maamulka Madaarada Jamaica, Audley Deidrick.